တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁
လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH အား ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ သမ္မတအိမ်တော် ၌ ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင်၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်မင်းတို့ တက်ရောက်ကြပြီး လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့်အတူ လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ရာတွင် လာအိုနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH က လာအို-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးများကောင်းမွန် တိုးတက် လျက်ရှိကြောင်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်မှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိမိတို့ ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီးကလည်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများပိုမိုတိုးတက်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း စကားပါးလိုက်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ-လာအိုနှစ်နိုင်ငံသည် ခွဲခြားမရ သည့် အိမ်နီးချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်ရေး ရရှိချိန်မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင် များအပြန်အလှန်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခဲ့သည့် အစဉ်အလာကိုမိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက်မြှင့်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ယခုခရီးစဉ်အတွင်း မိမိနှင့် လာအိုနိုင်ငံအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားအပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောတူညီချက် များစွာရရှိခဲ့ပါကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားမျှ တစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လာအိုနိုင်ငံက ပြတ်သားစွာရပ်တည်ပေးမှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် နယ်စပ်ကူးလူးဆက်ဆံမှု၊ ကုန်သွယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှုများအထိ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တပ်မတော်က မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှုများမရှိစေရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ် အကြား အပြန်အလှန် လည်ပတ်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ စဉ်ဆက် မပြတ်ပိုမိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးကိစ္စရပ်များ၊ တပမတော်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ၏လူမှုစီးပွားဘ၀ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ တို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ ၁၁
လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH ၏ဖိတျကွားခကျြအရ လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီး ရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနေ့ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ လာအိုပွညျသူ့ ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH အား ဗီယငျကနျြးမွို့ရှိ သမ်မတအိမျတျော ၌ ဂါရဝပွုတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ လာအိုနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံ သံအမတျကွီး ဦးကိုကိုနိုငျ၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊ လေ) ဗိုလျမှူးကွီး ကြျောကြျောမငျးတို့ တကျရောကျကွပွီး လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတနှငျ့အတူ လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှရေ့ာတှငျ လာအိုနိုငျငံသမ်မတ H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH က လာအို-မွနျမာနှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးမြားကောငျးမှနျ တိုးတကျ လကျြရှိကွောငျး၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၏ ခရီးစဉျမှတဈဆငျ့ နှဈနိုငျငံရှိရငျးစှဲခဈြကွညျရငျးနှီးမှု၊ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုးမွှငျ့နိုငျမညျဟု မြှျောလငျ့ကွောငျးဦးစှာနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက မိမိတို့ ခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အားလကျခံတှဆေုံ့မှုအတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ သမ်မတကွီးကလညျး နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြားပိုမိုတိုးတကျပါစကွေောငျး ဆုမှနျကောငျးတောငျး စကားပါးလိုကျပါကွောငျး၊ မွနျမာ-လာအိုနှဈနိုငျငံသညျ ခှဲခွားမရ သညျ့ အိမျနီးခငျြးကောငျး၊ မိတျဆှဟေောငျး၊ မိတျဆှကေောငျးမြားဖွဈပွီး လှတျလပျရေး ရရှိခြိနျမှစ၍ နှဈနိုငျငံခေါငျးဆောငျ မြားအပွနျအလှနျလညျပတျခွငျးဖွငျ့ ဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျခဲ့သညျ့ အစဉျအလာကိုမိမိတို့အနဖွေငျ့ ဆကျလကျမွှငျ့တငျနိုငျအောငျကွိုးစား ဆောငျရှကျနပေါကွောငျး၊ ယခုခရီးစဉျအတှငျး မိမိနှငျ့ လာအိုနိုငျငံအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးရေးနှငျ့ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွားအပွနျအလှနျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြားကို ကယျြပွနျ့စှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွပွီး သဘောတူညီခကျြ မြားစှာရရှိခဲ့ပါကွောငျး နှုတျခှနျးဆကျစကားပွနျလညျပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံ၏ နိုငျငံရေးအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏တရားမြှ တစှာ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျမှုမြားအပျေါ လာအိုနိုငျငံက ပွတျသားစှာရပျတညျပေးမှု အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးနှငျ့ နယျစပျကူးလူးဆကျဆံမှု၊ ကုနျသှယျမှုမြားမှတဈဆငျ့ ဒသေတှငျးကုနျသှယျမှုမြားအထိ တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျရေး၊ ကမ်ဘာ့လှညျ့ခရီးသှားလုပျငနျး မွှငျ့တငျရေးတှငျပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရေး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျတပျမတျောက မဆုတျမနဈကွိုးစားဆောငျရှကျပေးနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေ မူးယဈဆေးဝါး တိုကျဖကျြရေးနှငျ့တရားမဝငျ ကုနျသှယျမှုမြားမရှိစရေေးကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျော နှဈရပျ အကွား အပွနျအလှနျ လညျပတျမှုမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား စဉျဆကျ မပွတျပိုမိုတိုးတကျဆောငျရှကျနိုငျ ရေးကိစ်စရပျမြား၊ တပမတျောယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျ စလှေတျရေးကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံ ပွညျသူမြား၏လူမှုစီးပှားဘဝဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ တို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Chansamone CHANYALATH မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနား သို့တက်ရောက်